လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ လူနာတစ္ေယာက္ရဲ့ အသက္ကို အခ်ိန္မွီကယ္လိုက္နိုင္တာေၾကာင့္ ပီတိျဖစ္ေနတဲ့ ေမကဗ်ာ…. – Cele Oscar
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ လူနာတစ္ေယာက္ရဲ့ အသက္ကို အခ်ိန္မွီကယ္လိုက္နိုင္တာေၾကာင့္ ပီတိျဖစ္ေနတဲ့ ေမကဗ်ာ….
ပရိသတ်ကြီးရေ ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းမှာ ပြည်သူတွေ ရဲ့ အသက်တွေ တော်တော်များများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထနည်းနဲ့ မိမိရဲ့အသက် မိသားစုရဲ့အသက်အတွက် ကြိုးစားရုန်းကန်နေ ကြရတာပါ။ ရောဂါအခြေအနေဟာ အောက်စီဂျင်ကျပြီး အသက်ဆုံးရှုံး ရတာမျိုးဖြစ်တာကြောင့် အောက်စီဂျင်စက်တွေ လှူဒါန်းပေးကြသူတွေ လည်း အများအပြား ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ မေကဗျာ ဟာလည်း သူမကိုချစ်ခင် အားပေးခဲ့တဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က အကျိုးဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး Oxygen Concentrator 10 L တစ်လုံးကို ပဲခူးကလူမှုကူညီရေးအသင်းတစ်ခုကို လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။
စက်ကလေးဟာ ဒီနေ့မှာတော့ လူတစ်ယောက် ရဲ့ အသက်ကို အချိန်မီကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ” နေ့လည် စက်ရောက်ပြီးထဲက အိမ်ထဲမှာ ထည့်ထားတာ လိပ်ပြာမလုံ ဖြစ်ပြီး ဘယ်သူငှားမလဲ စောင့်နေတာ ဖုန်းဆက်လာတဲ့သူတွေက စက်မလိုဘူး အရည်ပဲ ထည့်ချင်တာဆိုတော့ ဆက်မပြောတော့ဘူး သူတို့မှာရှုစရာ အိုးရှိသေးတယ်ဆိုပြီး အရည်မရနိုင်ပါဘူး ဆိုပြီး ငြင်းထားတာ ၃ ယောက်မကဘူး ည (၁၀) နာရီ ကျော်မှာ ဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာတယ် လူနာက Spo2 55 ပဲ ရှိတော့တယ် ။ အောက်စီဂျင်အိုးလေး ကူညီပါတဲ့ ဟိုရောက် တော့ လူနာက ဟောဟဲစိုက် Spo2 တိုင်း ကားထဲရှိတဲ့ Facemask နဲ့ပိုက်ကိုယူ စက်မ ပြီး ဆင်းသွားတာ Facemask ပိုက်ဆိုပြီး ဖွင့်လိုက်တဲ့ အိတ်က RB ဖြစ်တော့ ပိုပြီး ဝမ်းသာသွားတယ် မမေကဗျာ လှူထားတဲ့ စက်က 10 L အပြည့်ပေးပြီး ခဏစောင့် ကြည့်တာ ချက်ချင်း ၈၅ ထိ တက်လာတယ်။ အားပေးစကားပြောပြီး မနက်ဆေးရုံသွားဖို့ သေချာမှာ အိမ်ပြန် အိပ်ယာထဲဝင် ဒီည လိပ်ပြာလုံစွာ နဲ့ အိပ်လို့ရပြီပေါ့လေ စက်ကြီး အိမ်ထဲ ထားပြီး အပြင်မှာ လေ လိုနေသူအများကြီး ရှိနေတာ သိရတော့ လဲ လိပ်ပြာမလုံဘူးလေ။ အခုတော့ အားနာစွာနဲ့ ငြင်းလို့ရသွားပြီ။ ” ဆိုပြီး ပရဟိတအဖွဲ့က အကျိုးဆောင် တစ်ယောက်က ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းလေးကို မေကဗျာက ” ကူညီခွင့်ရလို့အတိုင်းမသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သကျနွယ်ပရဟိတပဲခူးမှ တာဝန်ရှိသူများအားလုံး မောင်လေးထွန်းကိုကို ပဲခူးသားလေးကိုလည်း ကျေးဇူးပါ လှူမဲ့ကိစ္စတိုင်းကို အမြဲကူညီပေးလို့ ကဗျာတို့ကစက်ပဲလှူနိုင်တာပါ ခုလိုထိန်းသိမ်းပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက် မသွားနိုင်လို့ သကျနွယ်ပရဟိတမှတာဝန်ရှိသူများလည်းအထူးကျေးဇူးပါ အန္တရာယ်ကင်းစွာဖြင့် အသက်တွေအများကြီးကယ်နိုင်ပါစေ🙏🙏🙏 ” ဟုဆိုကာ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာ ပြန်လည်ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ သာဓုပါကဗျာရေ ဒီထက်မကတဲ့လှူဒါန်းမှုတွေ ဆက်လုပ်နိုင်ပါစေ။
Credit – May Kabyar
လက္ရွိမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ကိုဗစ္လူနာေစာင့္သူနာျပဳ ေၾကးႀကီးတဲ့အေပၚေျပာဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံလိုက္ရတဲ့ မိုးယုစံ….
ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ မင္းသားေခ်ာ ေျပတီဦးရဲ့ ဖခင္ႀကီး ယေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့…